Blue Island | Kufamba Nhau
Maria | | General, Kufarira
Mufananidzo | L35 Mapurani
Inowanikwa mudunhu reCarabanchel ndiyo hombe yekutenga muMadrid: Islazul. Iyo paradhiso yekutenga yeMadrilenians mazhinji muguta guru! Zita rayo rinomutsa zvisikwa, mvura, chiedza uye ruvara. Kunze, pfungwa idzi dzinouya pamwechete kuti dudzire muchigadzirwa chechivako, icho chinowanikwa kuburikidza neyakajairika façade yemabhuruu matoni ayo anonongedzera kumafungu echitsuwa cheguta. Asi mukati, Edheni rechokwadi nezve fashoni, cinema uye gastronomy yakamirira iwe. Chii iwe wakamirira kusangana naye? Isu tinokuudza zvese zvaunoda kuti uzive nezve Islazul muMadrid.
1 Chii chinonzi Islazul?
2 Shops muIslazul
3 Yelmo Cines muIslazul
4 Zvitsuwa zveIslazul
5 Nzira yekuenda sei kuIslazul?
5.2 Nechitima chepasi pevhu
5.3 Ne bhazi
Chii chinonzi Islazul?
Nenzvimbo yemamirimita mazana mapfumbamwe nemazana akapararira pamusoro pemafuriro maviri uye dzimwe nzvimbo dzinokwana mazana mana, 90.000 Islazul yakavhurwa musi waApril 4.100, 23 senzvimbo yekutenga yakagadzirirwa kunakidzwa nevashanyi vayo kwavakange vasingakwanise kungopedza zuva rinonakidza rekutenga asi unakidzwewo neinema mabhaisikopo uye unwe chinwiwa mune imwe yeresitorendi dzakawanda iyo inogara.
Dhizaini yechivako inoda kumutsa zvakasikwa uye inoreva zita raakabhapatidzwa naro: Islazul. Kusvikira pane izvi, ine bioclimatic uye yekucheka-kumucheto mapurani ekugadzirisa ayo anoita kuti ishandiswe simba rekushandisa pazasi peyakajairika mune urwu rudzi rwezvivakwa nenzira yakagadzirirwa kuchengetedza nharaunda.
Façade yaro izere nemakakombama, ichinyorovesa chimiro chinoyeuchidza zvakasikwa nemvura. Chiedza chakakoshawo mukuvakwa kweIslazul kuitira kuti usave nemanzwiro enzvimbo yakavharwa inoonekwa munzvimbo zhinji dzekutengesa, kunyanya dzakura. MuIslazul hamuna dambudziko rakadaro nekuti chivharo chemazuva ano chakajeka cheEFFE chakaisirwa, chakareruka, icho chinobvumidza kupinda kwechiedza chechisikigo, ichiendesa kunzwikwa kwenzvimbo yekunze, sekunge tanga tichitenga mumugwagwa apo muchokwadi tiri muchimiro nzvimbo uye yakafukidzwa.
Mune yega yega pasi yeIslazul, kutarisirwa kwakanyanya kwakatorwa mukugadzirwa kwemashoko enjanji, materu, pasi, pergolas, nezvimwe. pamwe nekumusoro uye kugadziridza iyo inotamba kukosha kwakanyanya pane inoonekwa ndege. Kuti uwane nzira ine simba, yakagadzirirwa kuti chivakwa chiwanikwe zvishoma nezvishoma paunofamba. Nzvimbo yega yega yakasarudzika uye inosimbisa ndiyo Plaza Islazul, uko chitsuwa chakafukidzwa nehuswa chinopfupisa mweya wepakati: nzvimbo yekutengesa kumutsa pfungwa dzedu.
Pasi pevhu ndipo pane zvimwe zvitoro zvine 95, pakati pazvo zvinoti: Primark, Parfois, Primor, Media Markt, Foot Locker, C&A, Alain Afflelou, Natura, Tenezis kana Zapshop, pakati pevamwe vakawanda. Pafloor yekutanga pane vamwe vakaita saBershka, H&M, Mango Marypaz, Pandora, Sfera, Misako kana Zara. Paburiro repiri nhamba yakaderedzwa kusvika muzvitoro zvina panomira mukoto we bowling nema cinema, zvatichataura nezvazvo pazasi.
Yelmo Cines muIslazul
Iyo Yelmo Cines theatre ari padhoro repiri reIslazul Shopping Center, kwaunogona kunakidzwa neazvino mabhaisikopo uye mafirimu akanakisa. Ivo vane gumi nematanhatu makamuri ekuona iyo yakanakisa cinema ine yepamusoro soro yeiyo triamplified 13 dolby dhijitari kurira uye ine yakanakisa skrini pamusika.
Kuenda kumamuvhi hakusi kudhura nguva dzose, asi Yelmo Cines de Islazul vakaronga kukwidziridzwa kwakawanda kunodzokororwa kazhinji kuita kuti tsika dziwanikwe kune vese vateereri. Semuenzaniso, nguva nenguva Mutambo weFirimu unoitika uko mutengo wetikiti wakadzikiswa zvakanyanya kusvika pamamiriyoni matatu emaeuro. Aya makamuri zvakare ane akakurumbira "zuva revatariri" Chitatu chega chega kuenda kumabhaisikopo aine anonaka mutepfenyuro pakupinda.
KuYelmo Cines Islazul zvinokwanisika kupemberera mazuva ekuberekwa evana. Imwe pfungwa yakasarudzika iyo vana vachada. Inosanganisira matikiti emuvhi, hotdog menyu, kana menyu yemapopcorn yemwana mumwe nemumwe Uye zvakare, ivo vanogashira chakashamisa chipo kubva kuYelmo Cines Islazul.
Iyi cinema ine yemahara yekupaka uye inogoneswa nekuwana kune vanhu vakaremara.
MuIslazul shopping centre muMadrid kune dzakasiyana siyana maresitorendi kusarudza kubva: chikafu chinokurumidza (Burger King, Taco Bell, Kentucky Fried Chicken ..), Italian (Ginos, La Tagliatella ..), Asia (Wok Garden, Ezushi ...), maAmerican (Tony Roma's, Foster's Hollywood, Ribs ...) uye akati wandei mashopu ekofi uye eice cream parlors maunogona kunakirwa nedhiri yakanaka senge Starbucks, Dunkin Donuts kana Llaollao, pakati pevamwe.
Nzira yekuenda sei kuIslazul?
M-40 (buda 27 Via Lusitana)
M-40 (kubuda 28)
M-45 (kubuda 2A)
A-42 (kubuda 6A)
R-5 (kubuda 27 Via Lusitana)
Nechitima chepasi pevhu
Est. Carabanchel Alto pa1,7 km.
Anomira pamusuwo weIslazul
Urban mutsara 35 - Pedyo nemusuwo weSouth yekuwana (Vertical Garden)
Mutsara wemuguta 118 - Pakati peNorth neSouth yekupinda musuwo (Vertical Garden)
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » General » Bhuruu chitsuwa
Maresitoreti anodziya uye epamoyo muBarcelona